Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : Toa mandeha ila toy ny kiraron’i Beminà!
Inty sy nday : Toa mandeha ila toy ny kiraron’i Beminà!
Nanomboka tamin’ny sabotsy teo tany Moramanga ny taom-panentanana ny vahoaka hirotsaka an-tsehatra amin’ny fandraisana anjara amin’ilay tarigetran’ny fitondrana ankehitriny, izay nofaritan’ny filohampirenena Rajoelina ao amin’ny Veliranony, dia ny hahatonga an’i Madagasikara indray ho rakotra ala maitso. Zavatra goavana be izany ary tena mahavelom-bolo satria misy akony lehibe amin’ny fiainan’ny zava-manana aina rehetra ny fiverenan’ny ala na ny mifanohitra amin’izany. Araka ny fanazavan’ny manam-pahaizana mantsy, ny fiovaovan’ny toetrandro amin’izao fotoana io dia vokatra ny faharavan’ny tontolo iainana, ary mitana anjara toerana amin’izany ny fahapotehan’ny ala. Ny aretina mitranga etsy sy eroa koa dia misy no mahazo vahana amin’izao fotoana isehoan’ny fiovaovan’ny toetrandro izao. Etsy ankilany, ny ho avin’ny taranaka faramandimby dia tsy azo anaovana resa-jaza fa iankinan-javatra goavana ny fahafahana mikojakoja ny tontolo iainana; ka iray ao anatin’izany ny fiverenan’ny ala mandrakotra an’ity nosindrazantsika ity mba holovain-taranaka.
Ny tsy maintsy ekena, eo anoloan’izany rehetra izany, dia ny hoe “aiza ho aiza tokoa moa ny pôlitikan’ny voly hazo eto amintsika izao?” Tsy vitan’ny teny indraim-bava mantsy izany, toy ny hoe “hazo iray na roa na telo isaka ny ankizy”, ary “raha manapaka hazo iray dia tokony hamboly hazo roa na telo”.
Tokony misy koa ny safidy hatao fa tsy maikan’ny hahazo vokatra amin’ny hazo fotsiny dia ihazakazahana ny mamboly an’ireo hazo haingam-paniry, fa mba jerena koa ny toeran’ireo hazo nanana ny hasiny manokana teto, raha fambolena hazo no asian-teny, toy ny andramena, ny voamboana, ny hazo ala, sy ny hafa.
Maika tokoa isika, ekena ary iombonan-kevitra izany, amin’ny fandrakofana ala an’i Madagasikara, fa tokony hisy ny fepetra mifanindran-dalana amin’izany eo amin’ny fanomezana lanja an’ireny hazo nanana ny anjara-toerany teto ireny. Matoa voasokajy ho lafo vidy ny andramena, ohatra, dia nitondra zavatra goavana maro teo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona ireny, na tsy voaresaka firy aza.
Etsy ankilany, ny fitrandrahana ala koa dia mitaky fahasahiana mandray fepetra hentitra satria fantatra ny olona maro fa loharanon-karena goavana ny ala, ary vao mainka mavesa-danja izany eo anoloan’ny andramena, nefa dia toa tsy tena matotra ny fampiharana ny lalàna ho fiarovana azy ireny sy ny fikojakojana azy mba ho tena mankany amin’ny tombontsoam-bahoaka marina ny fitrandrahana azy fa tsy ho lasan’olom-bitsy. Matetika dia olom-bitsy miara-dia amin’izay mitana ny fahefam-panjakana no tsy maty manota amin’izany ka tsy hahafahana mampahomby ny pôlitikan’ny voly hazo eto koa. Aza avela handeha ila re!